एनआरएनए अष्ट्रेलियामा सुरेन्द्र सिग्देल निर्वाचित - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
एनआरएनए अष्ट्रेलियामा सुरेन्द्र सिग्देल निर्वाचित
अष्ट्रेलिया, एनआरएनए अष्ट्रेलियाको अध्यक्ष पदमा सुरेन्द्र सिग्देल निर्वाचित भएका छन् । उनले भरत पोखरेललाई पराजित गरेका हुन् । सचिवमा तोनु गोथाने, सहसचिवमा भिष्मराज भण्डारी, कोषाध्यक्षमा डिला खरेल विजयी भएका छन् । राती १ः १० बजे मत परिणाम सार्वजनिक भएको हो ।
सार्वजनिक परिणाम अनुसार युवा संयोजकमा विजय शर्मा चापागाईं निर्वाचित भएका छन् । यस्तै इन्टरनेशनल कोअर्डिनेशन कमिटी आइसीसी मेम्बरमा केशव सापकोटा, ईश्वर कुईंकेल, प्रकाश जिसी, बालचन्द्र भट्टराई र डा. राजु अधिकारी निर्वाचित भएका छन् ।
यसैगरी एनएसडब्लु च्याप्टरको संयोजकमा दिनेश पोखरेल, डेपुटी कोअर्डिनेटर प्रकाश खरेल र सचिवमा भूपाल सिटौला निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यमध्ये अधिकांश सिग्देल पक्ष नै विजयी भएका छन् ।
सावधान ! अष्ट्रेलिया आउने आशमा ठगिनु होला
अष्ट्रेलिया । आकर्षक रोजगारीको नाममा भ्रामक रुपमा विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार गरि ठगहरु सलबलाएपछि […]
कोल्सबाट अायातित जमाइएको अनार ‘हेपाटाइटिज ए’ को प्रकोपसँग जोडीयो
सिड्नी । अस्ट्रेलियन सुपरमार्केट कोलस्बाट अायत गरीएको जमाइएका अनारको सेवन नगर्न एन एस डब्ल्यु हेल्थले […]
सिड्नी । गैरआवासीय नेपाली संघ अस्ट्रेलियाले सिड्नीको कुकपार्कदेखि ब्राइटन वीच सम्म एक विशेष यात्राको […]